I-ASUS ZenBook Pro eneScreenPad, ilaptop enesikrini sokuchukumisa kwi-trackpad yayo | Iindaba zeGajethi
Inkampani yaseTaiwan i-ASUS izise izixhobo ezitsha kwicandelo leencwadana zamanqaku. Nangona kunjalo, kufuneka siqaqambise uluhlu olutsha IZenBook Pro Ezibandakanya iimodeli ezimbini: i-14 kunye nee-intshi ze-15. Ayisiyi kuphela ukutshintsha ubungakanani bescreen, kodwa useto lwayo. Ngoku, yintoni eya kutsala umdla wakho yeyona trackpads yayo. Aba babhaptizwe njenge Iphepha lesikrini kwaye zisebenza njengomboniso wesibini.
Izikrini ze-intshi ze-15,6 kunye ne-14. Obu bubungakanani beepaneli eziza kusetyenziswa yi-ASUS ZenBook Pro entsha.Kwaye ngaphakathi kuzo zombini iimodeli Siza kuba nesigaba sesibhozo se-Intel Core processor. Kwimodeli ye-intshi eyi-15 singabandakanya i-Intel Core i9, ngelixa inguqulelo ye-14-intshi iya kunyuka iye kwi-Intel Core i7.
2 I-ScreenPad, izikrini ezincedisayo kwi-trackpad ye-ASUS ZenBook Pro yokuqalisa usetyenziso
I-ASUS ZenBook Pro 15
I-ASUS ZenBook Pro 14
Isikrini I-15.6 intshi 4K I-intshi eyi-14 epheleleyo ye-HD
Inkqubo Intel Core i9 Intel Core i7
Imemori ye-RAM ukuya kuthi ga kwi-16 GB ukuya kuthi ga kwi-16 GB
Ukugcina 1TB 4x SSD 1TB 4x SSD
Imizobo I-NVIDIA GeForce GTX 1051 Ti I-NVIDIA GeForce GTX 1050 Q-Max
Isandi UHarman Kardon UHarman Kardon
Inkqubo yokusebenza 10 Windows 10 Windows
Unxibelelwano I-Bluetooth 5.0 / i-WiFi ac / i-USB-C / umfundi weminwe I-Bluetooth 5.0 / i-WiFi ac / i-USB-C
Iphepha lesikrini I-5.5-intshi epheleleyo ye-HD yokuchukumisa okuninzi I-5.5-intshi epheleleyo ye-HD yokuchukumisa okuninzi
Kwelinye icala, izikrini ziya kuba nesisombululo esiphezulu se-4K kwimeko yeZenBook Pro 15 kunye nesisombululo esipheleleyo se-HD kwi-ASUS ZenBook Pro 14. Kwimeko yemodeli ye-15-intshi, inkampani ibonisa ukuba ine: Itekhnoloji ye-4-intshi ye-15,6K UHD NanoEdge enobuchwephesha bePANTONE®, i-100% ye-Adobe RGB yenkxaso yemibala, kunye nokuchaneka kombala? E (Delta-E) <2.0. Kwimodeli ye-intshi ye-14, kwelinye icala: ibonisa kuphela ukuba itekhnoloji esetyenzisiweyo yiNanoEdge Full HD. Yintoni egqithisile, indawo ekuhlalwa kuyo yomibini izikrini kwindawo iyonke ifikelela kuma-83 epesenti, ke izakhelo zincitshisiwe kwaye oku kwenza ubungakanani bayo bube ngcathu ngokuthelekiswa nezinye iimodeli zentengiso. Ngaphezulu, sinokukuxelela ukuba akukho zimbini ezidlula i-1,8 kilogram kubunzima bonke.
Ngokubhekisele kwi-RAM, umsebenzisi unokukhetha ulungiselelo ukuya kuthi ga kwi-16GB. Kwaye asinakukhalaza ngokugcina nokuba: zombini iimodeli ziya kuba nefayile ye- Ukucwangciswa kwe-4 SSD eya kuthi inike indawo ye-1 TB.
Ngokubhekisele kwinxalenye yemizobo, i-ASUS ZenBook Pro 15 iya kuba nayo I-NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti kunye ne-ASUS ZenBook Pro 14 ene I-NVIDIA GeForce GTX 1050 Q-Max. Siza kuba nesandi esisayinwe nguHarman Kardon; Ukudityaniswa kweBluetooth 5.0, ii-WiFi ac kunye namazibuko e-USB-C aneprofayile yeThunderbolt 3 (oku kuphela kwimodeli ye-15-intshi).
I-ScreenPad, izikrini ezincedisayo kwi-trackpad ye-ASUS ZenBook Pro yokuqalisa usetyenziso
Ngoku, siza kwelona phawu lubalaseleyo lolu sapho lwe-ASUS ZenBook Pro Kwaye yile nto bayibiza ngokuba yi "ScreenPad". Imalunga ne isikrini esincedisayo esifakwe kwi-trackpad yazo zombini iimodeli ezinokunceda umsebenzisi ukuba avelise ngakumbi Okanye inkampani ithi. Olu qulunqo luvakala kuthi njengelinge lokubandakanya enye indlela kwi "TouchBar" esinokuyibona kwiMacBook Pro yamva nje, kodwa kwenye indawo.
I-trackpad iya kuqhubeka nokusebenza ngokwesiqhelo. Ngoku, xa uvula le sekondari-ngendlela, ngombala opheleleyo-siya kuba nekhathalogu enkulu yeempawu ezineendlela ezinqumlayo kwizicelo. Ngokwengxelo ye-ASUS, le ScreenPad ixhasa oku kulandelayo: ixhasa usetyenziso lweMicrosoft Word, Excel, PowerPoint kunye neYouTube. ». Ngokukwanjalo, i-ASUS ithi isebenza ngokudityaniswa kwemisebenzi emitsha enje nge-ASUS Sync., Usetyenziso olukuvumela ukuba ulawule iselfowuni kwiscreen esincinci.
Ngokunjalo, nanjengoko kunjalo ngeemodeli zeApple, I-ASUS ishiya umnyango uvulelekile kubaphuhlisi benkampani yesithathu ukuba babandakanye amanqaku amatsha kule ScreenPad ye-ASUS ZenBook Pro yabo. Zombini ezi modeli ziya kuvela kwindawo yalo nyaka ka-2018. Nangona kuyinyani ukuba amaxabiso kunye nomhla wokuqaliswa awaziwa okwangoku. Ewe kunjalo, ziya kufumaneka ngee-shades ezimbini onokukhetha kuzo: Imvelaphi ye-Navy Blue okanye -kuze uqhubeke nefashoni- kwiGolide yeGolide.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Iikhompyuter » Iilaptop » I-ASUS ZenBook Pro eneScreenPad, ilaptop enesikrini sokuchukumisa kwi-trackpad yayo